MediaLight vs. Lumadoodle: အဓိကကွာခြားချက်များ - MediaLight ဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင်
MediaLight vs. Lumadoodle - အဓိကကွာခြားချက်များ
မင်းရဲ့ website ကိုငါတွေ့ပြီ ငါတိုက်ခန်းအသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့သောအခါငါပျက်စီး Lumadoodle ကနေလာပါတယ်။ မင်းရဲ့အလင်းတွေကပိုကုန်ကျရတဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိလား။ ငါကဲ့သို့အမှန်တကယ်ဒေတာကိုပြနိုင်ပါသလား။
သင်၏စာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပြီးနောက်ကျသောတုံ့ပြန်မှုကိုခွင့်လွှတ်ပါ ကျနော်တို့ဒီမေးခွန်းအများကြီးရပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်မေးခွန်းနှင့်အများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တုန့်ပြန်သည်။
အကယ်၍ ထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုသင် ၀ ယ်လျှင်၎င်းသည်လုပ်ရန်မလိုအပ်သော ၀ ယ်လျှင်ငွေစုနေသလား။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်တိကျမှု၊ အာမခံချက်သက်တမ်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုရွေးချယ်စရာများကိုပေးနေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့သည် Lumadoodle နှင့်ဈေးနှုန်းသက်သာသည့်ဘက်လိုက်မှုအလင်းအိမ်များကိုပြုလုပ်သည်။
ထို့ကြောင့်သင်ပိုမိုသင့်လျော်သောနှိုင်းယှဉ်မှုများပြုလုပ်လိုပါက Lumadoodle ကိုအသစ်စက်စက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပြခဲ့သည် LX1 ဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင် တူညီသော MediaLight အဖွဲ့ကနေ။
တိကျသောဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ပလတ်စတစ်ပြွန်ကိုဖယ်ရှား။ နောက်ကျောတွင်စတစ်ကာကပ်ထားခြင်းဖြစ်သော LED ချွတ်တပ်ဆင်ထားသော CRI (75 Ra သာ) တပ်ဆင်ထားသော LED ချွတ်ခြင်းထက်ပိုမိုသောအရာများရှိသည်။ Lumadoodle ကခင်ဗျားကိုယုံချင်တာပါ.
အကယ်၍ သင်သည် TV ပုံရိပ်အားအပျက်သဘောမသက်ရောက်စေလိုပါက CRI (Color Rendering Index)၊ အသားအရောင်ခွဲခြားမှုနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်အလင်း၏ရောင်စဉ်တန်းပါဝါဖြန့်ဖြူးမှုအတွက်စံနှုန်းများရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ကုန်ပစ္စည်းများ၏တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အင်္ဂါရပ်များကိုတိုးတက်စေရန်ခုနစ်နှစ်ကြာအသုံးချခဲ့သော်လည်း၎င်းတို့မှာလုံးဝတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိသေးပါ။ တိုးတက်မှုအတွက်နေရာများစွာရှိနေသေးသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိထားကြသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်လုပ်ရန်အမြဲကြိုးစားနေသည်။ ထို့ကြောင့် MediaLight ထုတ်ကုန်များကိုစတူဒီယိုနှင့် post ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံတိုင်းရှိဗီဒီယိုပညာရှင်များအသုံးပြုကြသည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် Lumadoodle, Govee, Antec, Zabiki သို့မဟုတ်အခြားသူများနှင့်လုံးဝဆက်စပ်မှုမရှိပေ။ သို့သော်အောက်ပါအတိုင်းထင်မြင်ချက်ကိုရှောင်ရှားပြီး spectrophotometric အချက်အလက်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်းကိုအာရုံစိုက်သည်။
ဒါပေမယ့်နောက်ကျောသင့်ရဲ့မေးခွန်းကို။ ငါနှင့်အတူပြည့်စုံသောတုံ့ပြန်မှုပေးပို့နိုင်ချင်တယ် အမှန်တကယ် အချက်အလက်တွေအရငါ Lumadoodle ယူနစ်အသစ်တစ်ခုကိုမှာလိုက်ပြီး Sekonic C7000 အောက်မှာတိုင်းတာခဲ့တယ်။
ဦး စွာ၊ ၎င်းတို့ကိုသက်ဆိုင်ရာထုပ်ပိုးမှုမှဖယ်ထုတ်ပြီး MediaLight ဘေးရှိ Lumadoodle ကိုကြည့်ရအောင်။ ပထမ ဦး ဆုံးသတိထားရမယ့်အချက်ကတော့ MediaLight မှာ LEDs ပိုများတယ်။ ၅ မီတာ Lumadoodle အစင်းတွင် LED5ရှိသည်။ MediaLight တူညီတဲ့အရှည်မှာ LEDs ၁၅၀ ရှိတယ်။ MediaLight တွင်မီတာတစ်ခုတွင် LEDs ၆၆.၆၆% ပို၍ ရှိသည်။
Lumadoodle နှင့် MediaLight နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
MediaLight ရှိချစ်ပ်များသည်အထွက်နှုန်းနိမ့်ပြီးပိုမိုမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုရှိသော SMD ချစ်ပ်များကိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်မများသော်လည်း LED အရေအတွက်တစ်ခုတည်းကို အခြေခံ၍ ၆၆% ပိုကုန်ကျသည်။ တကယ်တော့သူတို့ကုန်ကျသည် အနည်းဆုံး LED နှုန်း 20 ဆပို။
ဘက်လိုက်မှုအလင်း LED အရည်အသွေးကိုနှိုင်းယှဉ်
ပထမ ဦး ဆုံးပြောရရင်ဒါကပန်းသီးနဲ့ပန်းသီးနှိုင်းယှဉ်တာမဟုတ်ဘူး။
MediaLight သည်သိပ္ပံပညာရှင်များကိုပုံရိပ်ဆွဲခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် Lumadoodle ကမဟုတ်ပါဘူး။ MediaLight တွင်စိတ်ကြိုက် Colorgrade Mk2 ချစ်ပ်များနှင့် Lumadoodle မပါ ၀ င်ပါ။ ဒါကအဲဒီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကိုမနှောက်ယှက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကလူကောင်းတွေပဲ။ သူတို့ထုတ်ကုန်တွေဆောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာရုပ်ပုံအရည်အသွေးကိုမစဉ်းစားဘဲရိုးသားတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာသည်အရည်အသွေးနိမ့်သော LEDs များကိုရောင်းချသော်လည်းတိကျမှုရှိသည်ဟုဆိုသောကုမ္ပဏီများအတွက် ပို၍ နှစ်သက်သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က Lumadoodle ကိုကျွန်ုပ်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးနည်းပညာများစွာကဲ့သို့ပင်ထို အချိန်မှစ၍ တိုးတက်မှုများရှိလိမ့်မည်ဟုယူဆခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်တွင်၊ LED နည်းပညာသည်လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်အတွင်းသိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့သော်လည်း CRI (color rendering index) သည်အလွန်နိမ့်နေဆဲဖြစ်သည်။
Lumadoodle အရောင် Rendering အညွှန်းကိန်း (CRI) = 76.3 Ra (လစ်လပ်)
MediaLight အရောင်ပြန်ဆိုခြင်းအညွှန်း (CRI) ≥ 98 Ra
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ရောင်းချခဲ့သောပထမဆုံး (beta-test စမ်းသပ်မှု) MediaLight သည် CRI 2015 (ယခု 91-98 Ra) ကိုပြသခဲ့သည်။ သို့သော် ၂၀၁၅ MediaLight ၌ပင်ယနေ့ Lumadoodle ထက် CRI ပို၍ မြင့်မားသည်။
အသစ်ချွတ်ယခင်အစင်းထက်ပိုမိုပူနွေးတိုင်းတာ အဘို့ငါနေဆဲကဒီမှာငါ့အတိုင်းတာတွေ့နိုင်ပါသည် 2017 ထံမှသို့သော် ကျိုးကြောင်းဆီလျော် သူတို့ရဲ့ကြော်ငြာ CCT 6000K (ထို 6500K ရည်ညွှန်းစံနှိုင်းယှဉ်) နီးစပ်သူ။
ငါဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ကျိုးကြောင်းဆီလျော် ပိတ်လား
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို ISF မှလွတ်လပ်သောအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အတွက်တင်သွင်းသည်။ ကုမ္ပဏီအများစုသည်“ 6500K” ကိုအထုပ်ပေါ်တွင်“ အဖြူရောင်စင်” သို့မဟုတ်“ အဖြူရောင်စစ်စစ်” ကိုသာရိုးရိုးရှင်းရှင်းထုတ်ပေးသည်။ တစ်ခါတုန်းကအထုပ်မှာ“ အဖြူရောင်ပျော်ရွှင်” လို့ပြောတဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုဝယ်ခဲ့တယ်။ 😁
အဆိုးဆုံးပြစ်မှုကျူးလွန်သူနှစ် ဦး သော်လည်း Vansky နှင့် Antec ခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည်အလွန်ဆိုးသောကြောင့်သူတို့ကိုအမှန်တကယ်အသုံးပြုရန်နာကျင်ခဲ့သည်။ သငျသညျအစဉျအမွဲ crappy, ကြမ်းတမ်းသောအလင်းများနှင့်အတူတစ်လှေကားထစ်သို့မဟုတ်ကားရပ်နားကုန်းပတ်၌လမ်းလျှောက်လျှင်, ငါအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုငါသိ၏။
Vansky ဘက်လိုက်မှုအလင်းများ သူတို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ 6500K အရောင်အပူချိန်ပြောဆိုထားသည်ပေမယ့် နီးပါး 20,000K မှာတိုင်းတာ
Antec ဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင် သူတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်သူတို့၏အလင်းများကို“ အတိအကျသတ်မှတ်ထားသော 6500K သို့ချိန်ညှိထားသည်” ဟုဆိုသည် 54,000K မှာတိုင်းတာ။ အဲဒါကို sugarcoat မသွား, သူတို့ကကြောက်မက်ဘွယ်သောခဲ့ကြသည်။
ဒီနိဒါန်းထွက် rounding, Zabiki နှင့် Halo ဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင် ကံကောင်းထောက်မစွာ, သူတို့သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှထွက်သွားကြပြီဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ကိုငါပြန်လည်သုံးသပ်စရာမလိုတော့ပါ။
ထို့ကြောင့်အတိုဆုံးအဖြေမှာအရည်အသွေးမြင့်မားသော LEDs များပိုမိုမြင့်မားသောကြောင့် MediaLight ကိုတည်ဆောက်ရန်ပိုမိုကုန်ကျသည်၊ တိကျသော "ရည်ညွှန်းစံများ" နှင့်သင် LED strip ကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည် အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်သောဘက်လိုက်မှုအလင်း:
၇၆ အစား ၇၈ အစား CRI ≥98 (ဘက်လိုက်မှုမီးများသည်ပျှမ်းမျှအနည်းဆုံး ၉၀ ဖြစ်သင့်သည်)
ပိုမိုတင်းကျပ်သောတင်းတင်းခံနိုင်သည် (၅၀ ကီလိုမှ ၆၅၀၀ ကျပ်အတွင်း)
စင်ကြယ်သောကြေးနီ PCB ကိုဆောက်လုပ်ရေး
အခြားမီးများနှင့်သီးခြားစီ ၀ ယ်ရန်လိုအပ်သည့်အပိုပစ္စည်းများစွာ (Ie မှိုင်း နှင့် ဝေးလံသော, သငျ့လျြောအောငျပွုပွငျသောစကျ၊ ongg ပိတ်ခြင်း၊ တိုးချဲ့ထားသောကြိုး၊ ဝါယာကြိုးလမ်းကြောင်းကလစ်များ။
ငါတစ်စင်းလျှင် 66.66% ပို LEDs ဖော်ပြခဲ့သလား
I ကတိ ငါမကြာမီကုန်ကြမ်း photometric ဒေတာသို့ရတော့မယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမလုပ်ခင် Lumadoodle အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်စေပြီးအီးမေးလ်တွေ၊
ငါ Lumadoodle Pro ကိုမစမ်းသပ်ခဲ့ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့အဖြူရောင်မီးလုံးတွေထက်ပိုဆိုးတဲ့ spec တစ်ခုကိုထုတ်ဝေချင်တယ်ဆိုရင်ငါ့အတွက်လုံလောက်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီအီးမေးလ်ကနေသင်ခန်းစာတစ်ခုတည်းကိုသာသင်ယူလျှင် - "အရောင်ပြောင်းလဲခြင်းဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင်နှင့်အရောင်ကြည်လင်မှုမရောနှောပါနှင့်။
MediaLight strips အားလုံးသည် D65 အဖြူရောင်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကအရောင်တွေကိုမပြောင်းပါဘူး
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နှိုင်းယှဉ်မှုသည် MediaLight Mk2 နှင့် Lumadoodle အဖြူအကြားဖြစ်သည်။
Munsell N7000 ဆေးသုတ်ထားသောအခန်းတစ်ခန်းရှိမီးခိုးရောင်ကဒ်ပြားတစ်ချောင်းမှ Sekonic C18 ဖြင့်ယူသောအလင်းရောင်အစိပ်နှစ်ခုစလုံးမှတိုင်းတာမှုများအတွက် .csv format ဖြင့်အချက်အလက်များကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ (ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါင်းစည်းခြင်းကဏ္ sphere ကိုအခြားစာမျက်နှာများတွင်သင်တွေ့ကောင်းတွေ့ဖူးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကို အသုံးပြု၍ LEDs, bulbs နှင့် lamp heads များတပ်ဆင်ထားသည့် strips မ်ားကိုစမ်းသပ်ရန်) ။
အထက်ပါတိုင်းတာမှုများသည် LED strips မ်ား၏ ၁ မီတာအရှည်ဖြင့်ရိုက်ယူခဲ့သည်။
MediaLight နှင့် Lumadoodle အင်္ဂါရပ်များကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း
MediaLight တွင် dimmer ပါ ၀ င်သည်။ Lumadoodle တွင်သူတို့၏အဖြူရောင်မော်ဒယ်အတွက်မီးခိုးမြူမပါ ၀ င်ပါ။
MediaLight တွင်ဖွင့် / ပိတ်ခလုတ်ပါဝင်သည်။ Lumadoodle မလုပ်ပါဘူး သင့် TV ရှိ USB port သည် TV နှင့်မပိတ်ပါက၎င်းကိုဖြုတ်ရန်သင့်အားညွှန်ကြားထားသည်။
MediaLight ၏ dimmer နှင့်ဝေးလံခေါင်သီသော Harmony remote သို့မဟုတ် IR universal remotes များဖြင့် Lumadoodle တွင် dimmer မပါ ၀ င်ပါ။ ရောင်းချနိုင်သောယူနစ်သည် Harmony သို့မဟုတ် IR universal remote remote နှင့်မကိုက်ညီပါ။
MediaLight သည်သာလွန်ကောင်းမွန်သောလျှပ်ကူးခြင်းနှင့်အပူစုပ်ခြင်းစွမ်းရည်များအတွက်စင်ကြယ်သောကြေးနီ PCB (alloys-immersed) ကိုအသုံးပြုပြီး Lumadoodle ကမသုံးပါ။
MediaLight တွင် Lumadoodle တွင် adapter (မြောက်အမေရိကသာ) ပါဝင်သည်။
MediaLight တွင် ၅ နှစ်အာမခံနှင့် Lumadoodle အာမခံသည် ၁ နှစ်ဖြစ်သည်။
MediaLight သည်အရောင်များကိုမပြောင်းလဲပါ။ Lumadoodle သည်မတူညီသောအရောင်များဖြင့်မော်ဒယ်လုပ်သည်။ သငျသညျအရောင်များကိုပြောင်းလဲချင်လျှင်, Lumadoodle ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အရောင်ပြောင်းလဲခြင်းအလင်းရောင်သည်အရောင်ဝေဖန်သည့်ကြည့်ရှုရန်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိပုံကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်သည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ MediaLight ကသူတို့ကိုမကမ်းလှမ်းပါဘူး။
MediaLight သည် Imaging Science Foundation မှတိကျမှန်ကန်မှုရှိစေရန်အသိအမှတ်ပြုထားပြီးအရောင်ဝေဖန်ထားသောဗီဒီယိုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အလင်းရောင်အတွက် SMPTE စံနှုန်းများကိုကျော်လွန်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Lumadoodle သည်အတော်အတန်နီးကပ်သည် သူတို့ရဲ့ရန် ဖော်ပြထားပစ်မှတ် 6000K နှင့် 76 Ra ရှိသော်လည်း၎င်းသည်ရည်ညွှန်းစံသတ်မှတ်ချက်များမဟုတ်ပါ။
MediaLight LEDs များကို D65 (6500K နှင့် .003 of Δuv) တို့ဖြင့်ဖန်တီးထားသည် ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားသောနေရောင်ခြည်Δuvသည် Ra ၉၈ ရာ၏အလွန်မြင့်မားသောအရောင်ပြန်ဆိုခြင်းအညွှန်း (CII စံ illumuminant D65) နှင့်အညီဖြစ်သည်။ chromaticity ကိုသြဒီနိတ်သည် x = ၀.၃၁၂၇၊ y = ၀.၃၂၉ စံနှင့်အလွန်နီးစပ်သည်။
Lumadoodle ကအပူချိန် ၆၀၀၀K (အချို့စာမျက်နှာများရှိ) ကိုကြေငြာပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် 6000K ထက်ပိုမိုပူနွေးကြသည် (ဤနမူနာအတွက် ၅၆၀၀K ခန့်ဖြစ်သည်) ။ Lumadoodle ၏အရောင်ပြန်ဆိုခြင်းအညွှန်းကိန်း ၇၆ သည်အောက်တွင်ရှိသည် SMPTE- အကြံပြုသည် 90 Ra ၏နိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးကို။
ဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျပြောရလျှင်ပိုမိုမြင့်မားသော CRI မီးများသည် CRI အလင်းများထက် ပို၍ တိကျမှန်ကန်ပြီး ၇၆ သည်တိကျသောပုံရိပ်ဖော်ထုတ်ခြင်းအတွက်သတ်မှတ်ထားသောတံခါးအောက်တွင်ရှိသည်။
MediaLight ၏အနီရောင် R9 တန်ဖိုးသည်≥ 97. Lumadoodle တွင်အနုတ် R9 တန်ဖိုးရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Lumadoodle သည်၎င်း၏ရောင်စဉ်အနီတွင်နက်ရှိုင်းသောအနီရောင်မရှိဘဲအနည်းဆုံးရောင်စဉ်တန်းရှိအခြားအရောင်များနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။
နက်ရှိုင်းသောအနီရောင် (R9) သည်အသားအရေအောက်ရှိသွေးစီးဆင်းမှုကြောင့်အသားအရေတိကျမှန်ကန်မှုအတွက်အရေးကြီးသည်။ (သက်ရောက်မှုပြောင်းပြန်ဖြစ်သော်လည်း, တစ် ဦး transmissive display ကိုအတူပင်အရေးပါ) ။ မီးသည်အဘယ်ကြောင့်အစိမ်းရောင် / အပြာရောင်သွန်းခြင်းကိုအဘယ်ကြောင့်မြင့်မားသော CRI မီးခများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လေ့ရှိကြောင်းရှင်းပြသည်။ အလင်းတွင်အပြာနှင့်အဝါရောင်ထိပ်များပါဝင်သည်။
Spectral Power Distribution နှင့် MediaLight Mk2 ၏ CRI
Spectral ပါဝါဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် Lumadoodle ၏ CRI
၎င်းသည်အလင်းအရင်းအမြစ်နှစ်ခု၏ရောင်စဉ်တန်းပါဝါဖြန့်ဖြူးမှုအကြားခြားနားချက်ကိုမြင်ယောင်ရန်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂရပ်များထပ်တူကျလိမ့်မည်။ Lumadoodle အတွက်ရောင်စဉ်တန်းစွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းကို MediaLight Mk2 ၏ရှေ့မှောက်၌ထားရှိသည်။ Lumadoodle သည်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်တောက်ပသောအဖြူရောင်ပုံသဏ္appearsာန်ရှိပြီး MediaLight Mk2 အရောင်ပေါ်လာသည်။
Lumadoodle သည်အဝါရောင်ဖော့စဖောရက် (အမြင့်ဆုံးလှိုင်းအလျား ၅၈၀ nm ရှိဖော့စဖောရက်) ကိုအပြာထုတ်လွှင့်သူနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်အဖြူရောင်ကိုဖန်တီးသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည်။ Lumadoodle နမူနာတွင်အနီရောင်သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်အထွတ်အထိပ်မရှိပါ (အလင်းရောင်နှစ်ရောင် - အဝါရောင်နှင့်အပြာရောင်တို့ကိုပေါင်းစပ်။ CRI အဖြူရောင်အလင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်) မရှိပါ။
MediaLight Mk2 အတွက်သီးခြားအစိမ်းနှင့်အနီရောင်ထိပ်များကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ဂရပ်ပုံပေါ်တွင်အရောင်တောက်တောက်ရှိသောအရောင်များသည် Lumadoodle ရောင်စဉ်မှပျောက်သောအရောင်များကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အဖြူရောင် "တောင်ထိပ်" သည် Lumadoodle ရှိအဝါရောင်ဖော့စဖောရက်များ၏အမြင့်ဆုံးစွမ်းအင်ပမာဏကိုကိုယ်စားပြုသည်။
MediaLight တွင်အဝါရောင်အထွတ်အထိပ်မပါ ရှိ၍ ကျယ်ပြန့်။ ကျဉ်းမြောင်းသောအနီရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်ဖော့စဖော်များကို MediaLight Mk2 SPD ကို D65 နှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာပုံသဏ္giveာန်ရရှိစေရန်အပြာထုတ်လွှတ်သူနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် simulated D65 သို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ဤနှိုင်းယှဉ်မှုသည်၎င်းတို့၏ပြိုင်ဘက်များထံမှလာသည်။ စျေးကွက်ရှိထုတ်ကုန်များနှင့်မတူသည်မှာ Lumadoodle သည်တိကျမှုအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိဟုဆိုသော်လည်း၎င်းသည်အလားတူကုန်ပစ္စည်း LED LED strips များထက်မနိမ့်သော်လည်းစျေးနှုန်းမှာ MediaLight ၏စျေးနှုန်းထက်နိမ့်သည်။ ၎င်းကိုသူတို့ပေးသည်ထက်ပိုမိုကတိပေးသောကုမ္ပဏီများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ သူတို့က CRI ၇၆ ကိုကတိပေးတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်တိကျမှန်ကန်မှုကိုမလိုအပ်သောသူများနှင့်မရောင်းလိုကြပါ။ တီဗွီကိုတိုက်ရိုက်သုံးတဲ့လူများစွာဟာသူတို့ရဲ့ display ကိုချိန်ညှိတဲ့လူတွေထက်များတယ်။
ဤတွင် Lumadoodle ၏တည်ထောင်သူဖြစ်ကြသည် သူတို့ရဲ့ဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင်ထုတ်ကုန်များနှင့်မည်သို့သူတို့တစ်တွေကွဲပြားခြားနားအာရုံရှိသည်အကြောင်းပြောနေတာ။ ဒါမထူးဆန်းဘူး ဘက်လိုက်မီးလုံးများအဖြစ်ရောင်းချသော LEDs အများစုသည်တဲမီးများကဲ့သို့သောရည်ရွယ်ချက်များစွာအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကုန်ပစ္စည်း LED strips များဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အလင်းများသည်ထိတ်လန့်စရာကောင်းသည့်တဲမီးများကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ သို့သော်၊ တိကျမှုသည်အရေးမကြီးသောအခြေအနေများနှင့်တိကျမှုအတွက်ပေးဆပ်ခြင်းသည်အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်နှင့်မထိုက်တန်သည့်အခြေအနေများရှိသည်။ သင်မလိုအပ်သောအင်္ဂါရပ်များအတွက်သင်ပေးချေရမည့်ကုန်ကျစရိတ်ထက်ပိုသောအရာတစ်ခုကိုသင်ဘယ်တော့မှမဝယ်သင့်ပါ။
အကယ်၍ သင်၏တီဗီကိုချိန်ညှိပါကမတိကျသောအလင်းများသည်၎င်းကိုကြည့်ရှုသူ၏ရှုထောင့်မှအလိုအလျှောက်ပြန်လည်ချိန်ညှိနိုင်သည်။ MediaLight နှင့် Lumadoodle တို့၏ chromaticity နှင့် color rendering အကြားသိသာထင်ရှားသည့်ကွဲပြားခြားနားမှုများမှာများစွာသောကိစ္စရပ်များတွင်သင်၏ display ၌သင်ပြုလုပ်မည့်အပြောင်းအလဲများထက်များစွာပိုလွန်သွားပြီးအလင်းများသည်အမြင်အာရုံအဖြူအမှတ်အသားကိုဖော်ပြပေးနိုင်သဖြင့်အရောင်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကိုသိမြင်နိုင်သည် နှင့်တင့်ခြားနားချက်ကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်။
ကြည့်ရှုသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အလင်းသည်အလွန်ပူနွေးပြီးΔuvလည်းမြင့်လွန်းပါက simulated D65 အလင်းထက် ပိုမို၍ ကြည်လင်ပြတ်သားသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်တီဗီသည် D65 ထက် ပို၍ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကိုပိုမိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်၊
ထို့အပြင်တိကျမှန်ကန်မှုခြားနားချက်မရှိပါကစျေးနှုန်းအပေါ် မူတည်၍ ပန်းသီးနှင့်ပန်းသီးနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအတွက် Lumadoodle ထဲသို့သင်ထည့်ချင်သောအခြားအရာများရှိသည်။ ဤပစ္စည်းများတွင်အဝေးထိန်းထိန်းချုပ်မှု၊ မျက်နှာပြင်၏အမြင့်ဆုံးတောက်ပမှု၏ ၁၀% ကိုသတ်မှတ်ထားပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်မှေးမှိန်သော) AC adapter တစ်ခု၊ extension ကြိုးတစ်ခု၊ မြင့်မားသော LED သိပ်သည်းဆနှင့်ကြာရှည်ခံရန်အာမခံကာလလိုအပ်သည်။ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထည့်သွင်းခြင်းကစျေးနှုန်းကွာဟမှုကိုသိသိသာသာလျော့ကျစေသည်။
သော့ချက်ကျသောကုန်သွယ်မှုသည်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်တိကျမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ သင်လိုအပ်သောတိကျမှန်ကန်မှုကိုမရရှိပါကစျေးနှုန်းချိုသာသော်လည်းသင်အလွန်ပေးဆပ်နေဖွယ်ရှိသည်။ အကယ်၍ သင်တိကျမှန်ကန်မှုကိုမလိုအပ်လျှင်ဤစာမျက်နှာတွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ထားသောထုတ်ကုန်များထက်စျေးသက်သာသည့်ထုတ်ကုန်နှင့်ပိုသင့်တော်လိမ့်မည်။